China 2 amin'ny 1 mug heat press press factory sy mpanamboatra | Taile
1. [Mora miasa]: Fanaraha-maso fotoana fohy fanaovana mofo. fanerena azo ovaina. tonga miaraka amin'ny fiasa fanitsiana mari-pana sy fanairana henjana. na ny fitaovana mahatohitra hafanana aza dia mijanona hatramin'ny 230 ° C (450 ° F).
2. [Indikator'ny mari-pana LED]: Asehoy ny mari-pana (amin'ny Fahrenheit) sy ny fotoana marina. mari-pana: 0 - 450 degre F; fe-potoana: 0 - 999 segondra. fanaraha-maso fotoana fohy fanaovan-mofo.
3. 【Fampidirana Mug roa misy】: Mug Press # 1 3 "-3.5" savaivony (11oz), Mug Press # 2 12oz latte mug (cone)
4. [Fiarovana azo ampiasaina]: Ity milina fanodinana hafanana mug ity dia misy tanany mirindra miaraka amina fehin-tànana ergonomika, mitazona ny tananao hiala amin'ilay singa mafana.
5. [Fampiharana midadasika]: Ny milina fanaovan-gazety dia afaka mamindra sary, teny amin'ny kaopy, mety amin'ny famokarana fanomezana, haingon-trano, dokam-barotra, hetsika fampiroboroboana, kojakoja manokana ary indostria hafa. Fampandrahoana sary, sary na sary eo ambonin'ny mug ho an'ny dokam-barotra, tanjona fanomezana miaraka amin'ny vokatra kanto sy ampiharina.
6. [Fiarovana azo ampiasaina] Ity milina fanodinana hafanana kapoaka ity dia manana tanany mirindra miaraka amina fehin-kibo ergonomika, mitazona ny tananao ho lavitra azo antoka amin'ny singa mafana. Tongava miaraka amin'ny asa fanitsiana mari-pana sy fanairana henjana.
7. [Voageja mifono] Fihazonana fingotra ahazoana aina amin'ny fampiasana isan'andro sy ny famokarana lava.
8. [Volom-bidy azo ovaina] Azo idirana, manitsy ny fanovana ny fomba ahafahana ahitsy mifanaraka amin'izany ny tsindry mba hahazoana antoka fa marina ny fanerena sy ny famindrana madio.
9. [Ireo singa mifono teflon] Ny fisaka tsy matevina dia manakana ny famindrana tsy hirehitra, ary tsy mila takelaka silicone / teflon misaraka.
10. [Fampiharana fiainana bebe kokoa] Mety amin'ny kaopy seramika, tavoahangy tsy misy fangarony, tavoara vita amin'ny vera, sns ... (zavatra mafy no tsy maintsy arakotra) azonao atao ny mamorona manokana sy manam-pahaizana manokana hanome ho toy ny fanomezana namboarina sy noforonina tamin'ny ny anao manokana, io koa dia fomba tsara hanatsarana ny orinasa sublimation.
11. [Aorian'ny varotra varotra]: Fiantohana ny fahafaham-po.Raha misy antony tsy nahafa-po anao dia ampahafantaro anay anay ary ny serivisinay dia hanao izay azonay atao mba hanampiana anao.
1.Power fidirana: 110V / 220V
2.2x mug attachment: 3.1 "- 3.5" savaivony (9 "L x 4.5" H)
Ohatra: mug lehibe 3,3 "x 3,7"
Faritra famindrana mifandraika: 7.9 "x 3.8"
Fampiraisana mug latte
3.5 "savaivony ambony x 2.5" savaivony ambany farany ambany x 4 "latte mug latte
Faritra famindrana mifandraika: haavo 7,9 "ambony x 6" ambany x 3,3 "
3.Ny elanelam-potoana: 0 - 430 Fahrenheit diplaoma
4. Fe-potoana: 0 - 240 segondra
5. Fanitsiana toetr'andro: -5 ~ +5 Fahrenheit diplaoma
Dingana amin'ny fanontana ny sary dizitalinao amin'ny mug:
Dingana 1: Makà sary ary apetaho amin'ny ranomainty sublimation sy ny inkjet mpanonta ao amin'ny taratasy sublimation.
Dingana 2: Hetezo amin'ny habe mety aminy ny taratasy.
Dingana 3: Ataovy ao anaty masinina ny mug hanitsy ny tsindry ary hamoaka azy. Mariho fa: zavatra mafy dia tsy maintsy mifono. (Raha ratsy ny effet sublimation dia jereo raha misy fonosana sublimation eo amboniny)
Dingana 4: Jereo ny boky torolàlana antsika ary apetraho ny mari-pana sy ny ora.
Dingana 5: Andraso ny hafanan'ny milina hatramin'ny hafanana kendrena.
Dingana 6: Ataovy ao anaty taratasy ny mug miaraka amin'ny taratasy sublimation ary hidina mafy ny mari-pana.
Dingana 7: Rehefa miakatra amin'ny maripana kendrena ny mari-pana dia tsindrio ny bokotra Ok.
Dingana 8: Rehefa mivoaka ny masinina, alao ny sambo.
Teo aloha: Masinina fanontana hafanana vaovao miisa 5 amin'ny 1